LABEL tamin'ny laser CUTTER
Modely No.: JMCCJG-350400LD
CO2 Laser Cutter for Filter Lamba / Industrial Filtration damba
Fitaovana avo marina tsara sy ny fitoeran'entana. Nanapaka hafainganam-pandeha ho any 1200mm / s. Izao tontolo izao-kilasy CO2 vy tamin'ny laser RF 150W, 300W, 600W. Vacuum conveyor. Automatic sakafo, fihenjanana fanitsiana.
Modely No.: JMC-250300LD
Gear & fitoeran'entana entin'ny CO2 Laser Cutter for Technical Textiles
Modely No.: JMCCJG-160300LD
High Speed ​​akanjo Fabric Laser Cutting Machine
Fa salantsalany sy madinika batch sy ny isan-karazany ny famokarana akanjo, indrindra mety ho namboarina fitafiana. Conveyor miasa latabatra, mandeha ho azy sy ny lavany feeder akany.
Modely No.: XBJGHY-160100LD II
Dual tsy miankina Head Leather Laser Cutting Machine for Footwear
Roa tamin'ny laser izay loham-misaraka amin'ny tsirairay dia afaka manapaka sary samihafa indray miaraka. Ny isan-karazany tamin'ny laser fanodinana (tamin'ny laser fanapahana, punching, scribing, sns) dia azo vita indray mandeha monja.
Modely No.: ZJJF (3D) -160LD
Modely No.: ZJ (3D) -170200LD
Galvo Laser Leather sokitra Cutting Machine for Shoe Indostria
Top hafainganam-pandeha sy ny lehibe tamin'ny laser endrika sokitra, perforating sy ny fanapahana. Dual rafitra mitondra fiara miaraka amin'ny fitaovana rafitra fitoeran'entana. Optimisé galvanometer rafitra.
Modely No.: ZJ (3D) -9045TB
Modely No.: ZJJG (3D) 170200LD
Galvo Laser nanapaka sy Perforating Machine for Jersey Fabric
Ny zavatra maro tamin'ny laser milina izay afaka manapaka, asio soratra, perforate sy manoroka-tapaka nandritra ny jerseys, polyester, microfiber, dia manainga lamba.
Modely No.: CJGV-160130LD
Modely No.: JGC-160100LD
Modely No.: XBQNZDJG-160120LD II
Loha Vision tsy miankina roa Camera Laser Cutter Machine
Modely No.: CJGV-320400LD
Modely No.: LC-350
Roll ny Ankino Label Laser Cutting Machine
Laser Golden no ampiharina tamin'ny laser teknolojia orinasa eo amin'ny sehatry ny tena adhesive maty etikety fanapahana. Noho ny horonan-taratasy ny manakodiava fanapahana tamin'ny laser rafitra, dia afaka manapaka tena indrindra adhesive etikety, pirinty marika, autocollant, taratasy, film, sns
Modely No.: LC-230
Zavatra tsy maty tamin'ny laser cutter indrindra sakany 230mm aterineto, miaraka amin'ny CO2 RF tamin'ny laser 70W, 100W na 150W. Noho ny horonan-taratasy ny manakodiava fanapahana tamin'ny laser rafitra, dia afaka manapaka tena indrindra adhesive etikety, pirinty marika, autocollant, taratasy, film, sns
Modely No.: LC230
Laser maty nanapaka Machine for hisainana Material / hamindra Film
Laser Dié-tapaka hisainana fitaovana, tonga lafatra ho an'ny avo-fahitana akanjo orinasa. -Dingana rehetra automatique. Indrindra tamin'ny laser fanapahana
Tsy manome vahaolana mifototra amin'ny fampiharana tamin'ny laser teknolojia. Fidio ny orinasa: ny tena vahaolana sahaza tamin'ny laser mety aminao
TUBE & sodina